Vidio ny soroka fanaintainan'ny soroka sy ny hatoka Tiger Balm Pain Patch - fandefasana maimaim-poana ary tsy misy haba | WoopShop®
Soroka sy soroka fanaintainan'ny Tiger Balm Pain Patch
Soroka sy soroka fanaintainan'ny Tiger Balm Pain Patch tafaverina ary halefa raha vantany vao tafaverina ny tahiry.
Anaran-javatra: patch balsama tigra
Fiantrana: 2 taona
Zava-dehibe: Mametaka millettia, cistanche masira, davallia mariesii, Chain fern, seleria dia, safflower, spignet, corydalis, ary bearol, sns.
Function: Lumbar, servisy, Spondylosis, fihenan'ny hozatra, marary Lumbus, kapila mipetaka, lamosin-tongotra eo an-damosin-tongotra, ny fanaintainan'ny tanana.
Endri-javatra amin'ilay patch manala fanaintainana:
Zava-mahadomelina avo lenta, vokany haingana, asa lava
Fifanarahana biolojika tsara, tsy misy allergy sy fahasosorana amin'ny hoditra
Firaikitra mety, apetaho amin'ny hoditra, tsy hifikitra volo amin'ny vatana
Fahazoan-drivotra tsara sy fividianana rano, fadio ny famontsina ny hoditra amin'ny fampiasana maharitra.
Ny asan'ny patch manala fanaintainana:
Manala haingana ny fanaintainana isan-karazany mifandraika amin'ny havizanan'ny hozatra, fanaintainan'ny hozatra, soroka henjana, aretin-damosina tsotra, fihenjanana, fivontosana, mangana, fivontosan'ny taolana, fanala kely, aretin-tratra. (ilaina ho an'ny mpiasan'ny birao, malaza amin'ny toetrandro mafana sy faritra wam).
Ilay faritra voadio madio sy maina
Esory ny plastika manohana ny lafiny iray amin'ny patch.
Araho io lafiny io eo amin'ny faritra ilanao fanamaivanana fanaintainana.
Rehefa esorinao ny antsasaky ny fitaovana plastika, dia aforeto ny sisa tavela eo amin'ilay faritra.
* Esory amin'ny sary mihetsika ary apetraho.